Momba anay - Kingsine Electric Automation Co., Ltd.
Kingsine Electric Automation Co., Ltd. dia nanam-pahaizana manokana momba ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana fitaovam-pitsapana elektrika sy fandrefesana hatramin'ny taona 1999 izay omena voninahitra ihany koa ho mari-pahaizana momba ny haitao avo lenta sy mari-pankasitrahana momba ny lozisialy eken'ny fahefan'ny China. Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta isan-taona, Kingsine dia mahazo ny mpamokatra sinoa ambony indrindra ho an'ny fitaovana fitsapana elektrika ao amin'ny tsenan'ny tester-tester an-trano.
Fikarohana sy fampandrosoana:
Kingsine koa dia manana ny teknisiana matanjaka sy manam-pahaizana ary afaka manome vahaolana fitsapana herinaratra mifanaraka amin'ny famaritana ny mpanjifa, Miaraka amin'ny hevitra noforoniny All-in-One sy ny patanty maro, ny vokatra Kingsine dia nankatoavin'ny China National Institute of Institiota fikarohana momba ny metolojia sy angovo isaky ny faritany ary koa ny mari-pahaizana CE.
Miaraka amin'ny ISO 9001: 2000 voamarina ary miorina amin'ny faritra avo lenta ao afovoan-tanànan'i Shenzhen mpifanila vodirindrina Hong Kong, i Kingsine dia manambatra ny fomba fanodinana ary ny fandrosoana amin'ny fomba fanamboarana, indrindra amin'ny Protection Relay Test Set, Power Standard, Power Calibrator, RTU-Tester & Multifunctional Power Meter , izay miantoka ny vokariny miaraka amina garantie kalitao 3 taona amin'ny fanamboarana maimaimpoana.
Marketing sy serivisy:
Ankehitriny ny vokatr'i Kingsine dia neken'ny firenena 70 mahery eran'izao tontolo izao amin'ny indostrian'ny herinaratra, metallurgy, petrochemical, fitrandrahana lalamby ary andrim-pikarohana siantifika ary koa fivarotana metatra sy ozinina relay miaro, ary fandraisana tsara avy amin'ny herinaratra manerantany. & Fampirantiana angovo toa ny
POWER-GEN Iraisam-pirenena any Etazonia, Moyen Orient avy any Dubai, HANNOVER MESSE any Alemana ary FIEE Electrical any Brezila. Ny Relay-Tester dia mety miasa amin'ny fitaovana fiarovana malaza malaza manerantany toy ny ABB, SIMENS, ALSTOM, TOSHIBA, SCHNEIDER, AREVA, SEL, GE sns ary Kingsine koa dia manome ny serivisy feno amin'ny fizarana haratany avy amin'ireo firenena mpiara-miombon'antoka eropeana, Azia sy Moyen Orient.
Miorina amin'ny finoana ny Novelty amin'ny haitao ary ny antsipiriany amin'ny serivisy, fametrahana tsikelikely ny serivisy maneran-tany sy ny varotra miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy fizarana manerantany, dia tsy hanohy ezaka i Kingsine hanompo ny mpanjifa manerantany miaraka amin'ny haitao vaovao, vokatra azo antoka ary kalitao an-tserasera serivisy, ary ataovy mora kokoa izao tontolo izao fitsapana herinaratra.
Fitsapana fampitàna an-tsokosoko, Fitsapana fampitana, Fiarovana Relay Tester, Fitsapana fampitana niomerika, Fitsapana fampitàna lavitra, Fitsapana fampitana mivantana, Vokatra rehetra